သေဆုံးနေသောကြယ်မင်း ဒါမှမဟုတ် ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ့် Cryptocurrency
12 Oct 2018 . 12:38 PM
အခုချိန် Cryptocurrecny လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ Digital Money ကို Bitcoin နဲ့ဝယ် ၊ အွန်လိုင်းမှာ ပြန်ရောင်းတဲ့ “ငါသာမင်းလောင်း၊ ထီးဖြူဆောင်းတဲ့ခေတ်” ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ သူ့ဘာသူ $20,000 အထိ တန်ကြေးမြင့်၊ အချိန်ကောင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုမယ့် သေဆုံးနေတဲ့ ကြယ်တစ်စင်းလို အရောင်တဖိတ်ဖိတ် မတောက်ပနိုင်တော့ဘဲ ၂၀၁၈ ထဲမှာပဲ ကွယ်ပျောက်သွားရတော့မှာပါ။
ဘာလို့လဲ? Crypto လှိုင်းလုံးကြီး ရိုက်ခတ်လာတဲ့ ၂၀၁၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ သူဌေးတွေဖြစ်ကုန်ကျတယ်၊ အဆိုတော်၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေကအစ Bitcon တန်ကြေးတက်လာလို့ သူတို့ပိုင်ဆိုင်တာတွေ ဈေးမြောက်ကုန်တယ်၊ အထူးသဖြင့် Cryptocurrency လောကမှာ Bitcoin နဲ့ ဘီလျံနာဖြစ်လာတဲ့ သူဌေးအမွှာ Winklevoss Twins တို့က စံပြဖြစ်နေလို့ ချမ်းသာချင်တာမဆန်းပါဘူး။
Winklevoss အမွှာ မချမ်းသာခင်တုန်းက Professional လှေလှော်အားကစားအဖြစ်နဲ့ အသက်မွေးခဲ့ကြတယ်၊ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆုတံဆိပ်ရတဲ့အထိ ထူးချွန်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလို အားကစားသမားဘဝကနေ ConnectU ဆိုတဲ့ Social Media တည်ထောင်လိုက်တဲ့ ၂၀၀၄ ကစလို့ ပိုပြီးလူသိများလာတယ်၊ အဲ့နှစ်ထဲမှာပဲ အချက်လက်ခိုးယူတယ်လို့ Facebook ကို စွပ်စွဲခဲ့ပြီး အမှုနိုင်တော့ အလျော $65 သန်းရခဲ့တယ်၊ ဒါနဲ့ ၂၀၁၃ လောက်မှာ Bitcoin ကို အခြေခံထားတဲ့ Math-based Asset ဝန်ဆောင်မှုစတင်ခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလည်းရောက်ရော Bitcoin တန်ကြေး $20,000 ရှိလာတဲ့အချိန်မှာ Cryptocurrency နဲ့ ချမ်းသာလာတဲ့ ဘီလျံနာအမွှာအဖြစ် ပြဌာန်းခံရတယ်။ ဒီလို Bitcoin နဲ့ ချမ်းသာချင်တဲ့လူတွေ ဘာလုပ်သလဲ? Mining Rig တွေဆင်ပြီး အမုန်းရှာကြတယ်၊ ဈေးကွက်ထဲမှာ GPU In-stock ပြတ်သွားတဲ့အထိ ဖြစ်ကုန်တယ်။
တချို့ငမ်းငမ်းတက်ဖြစ်သူတွေက သုတေသနစင်တာကြီးတွေ၊ စူပါကွန်ပျူတာတွေ သုံးပြီးရသလောက် နှိုက်ကြတယ်၊ အဲ့ထဲမှာ Tesla တောင် အစစ်ပါသွားသေး၊ ရုရှားသိပ္ပံပညာရှင်တချို့တောင် အလုပ်လုပ်ရင်း Crypto-mining လုပ်နေလို့ အစိုးရအရေးယူ၊ Facebook နဲ့ တရုတ်မှာ Ban ထားလိုက်တဲ့အထိ ကပ်ပါးတစ္ဆေလို Crypto မုဆိုးသွေး စုပ်သောက်ခဲ့ကြတာပါ။
Cryptocurrency & some whereabouts
အခုတော့ Juniper Research သုတေသန အဖွဲ့စည်းက Cryptocurrency မကြာခင် ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပြီ။ ဒီလို ဝင်သက်၊ ထွက်သက် မမှန်တော့ဘဲ အသက်ရှုမဝဖြစ်သွားရတာ ဘယ်လိုတွေကြောင့်လဲ? အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်၊ 2018 ပထမသုံးလပတ် (ဇန္နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်) မှာ $1.4 ထရီလီယံ ရှိခဲ့တယ်၊ $1.4 ထရီလီယံ ရှိခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ တစ်နှစ်လုံးနဲ့ယှဉ်ရင် တော်တော့ကို ထောင်တက်သွားတယ် ပြောရမယ်ပေါ့၊ ဒါမယ့် ဒုတိယသုံးလပတ် (ဧပြီ၊ မေ၊ ဇွန်) လဲရောက်ရော $355 ဘီလီယံပဲ ရှိတော့တယ်၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် 75% လောက် ထိုးဆင်းသွားတယ်ပေါ့။
Cryptocurrency Chart 2018
Juniper ကတော့ ထပ်ပြီးကျနေဦးမယ်၊ တတိယသုံးလပတ် (ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ) ပြီးသွားရင် 47% လောက် ကျလာဦးမယ်။ ဒီိရေကျတာထက်တောင် အခြေနေဆိုးနေတဲ့ Cryptocurrency ဂယက်က ဆိုးရွားလာတဲ့ အမေရိကန် ၊ တရုတ်ဆက်ဆံရေး အခြေနေကြောင့်လား မပြောတတ်ပေမယ့် Bloomberg မှာတော့ စကားစစ်ခင်းနေပြီ။
Has seemed to be fallen
ဒီလို တစ်စထက်တစ်စ အဆိုးဖက်ကိုဦးတည်လာနေတဲ့ အခြေနေကြောင့် Bitcoin ငွေပို့၊ ငွေလွှဲ အရေတွက်လည်း အနှုတ်ပြလာတယ်။ ၂၀၁၇ မှာတုန်းက တစ်ရက်ကို အကြိမ်ရေ 360,000 လောက် လွှဲပြောင်းခဲ့တာကနေ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ ရောက်လာတော့ 270,000 လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်။ ငွေသားအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် $3.7 ဘီလီယံကနေ $670 မီလီယံ ဂဏန်းအထိ ထိုးဆင်းလာတယ် ဆိုရမယ်ပေါ့။
အခုလို အခြေနေတိုင်းသာဆိုရင် ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာတင် Cryptocurrency ဆိုတာကြီး လူတွေပါးစပ်ဖျားကနေ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်၊ ဒါထက် Blockchain နည်းပညာသုံးပြီး သုံးရပိုလွယ်အောင် ထောက်ပံ့ထားတဲ့ Platform နဲ့ Software စီမံကိန်းတွေ၊ ဘဝထဲတောင် မရောက်လိုက်ရဘဲ အဝမှာတင် ပြည်ဖုံးကားချခံလိုက်ရပြီလား၊ ပိုဆိုးသွားမှာက HTC၊ Exodus စမတ်ဖုန်းနဲ့ Blockchain နည်းပညာကို အမွေယူထားတာ။ ဒီလို ပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတာထက် Cyrpto-cash နဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာတေ့ာ အသုံးတွင်ကျယ်နေဦးမှာမို့ Long Live Cryptocurrency လို့ပဲ ပြောချင်ပါတော့တယ်။
သဆေုံးနသေောကွယျမငျး ဒါမှမဟုတျ ပြောကျကှယျသှားတော့မယျ့ Cryptocurrency
အခုခြိနျ Cryptocurrecny လို့ ပွောလိုကျတာနဲ့ Digital Money ကို Bitcoin နဲ့ဝယျ ၊ အှနျလိုငျးမှာ ပွနျရောငျးတဲ့ “ငါသာမငျးလောငျး၊ ထီးဖွူဆောငျးတဲ့ခတျေ” ကုနျဆုံးသှားခဲ့ပါပွီ။ သူ့ဘာသူ $20,000 အထိ တနျကွေးမွငျ့၊ အခြိနျကောငျးပိုငျဆိုငျခဲ့တယျဆိုမယျ့ သဆေုံးနတေဲ့ ကွယျတဈစငျးလို အရောငျတဖိတျဖိတျ မတောကျပနိုငျတော့ဘဲ ၂၀၁၈ ထဲမှာပဲ ကှယျပြောကျ သှားရတော့မှာပါ။
ဘာလို့လဲ? Crypto လှိုငျးလုံးကွီး ရိုကျခတျလာတဲ့ ၂၀၁၇ နှဈကုနျပိုငျးမှာ သူဌေးတှဖွေဈကုနျကတြယျ၊ အဆိုတျော၊ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျတှကေအစ Bitcon တနျကွေးတကျလာလို့ သူတို့ပိုငျဆိုငျတာတှေ ဈေးမွောကျကုနျတယျ၊ အထူးသဖွငျ့ Cryptocurrency လောကမှာ Bitcoin နဲ့ ဘီလြံနာဖွဈလာတဲ့ သူဌေးအမှာ Winklevoss Twins တို့က စံပွဖွဈနလေို့ ခမျြးသာခငျြတာမဆနျးပါဘူး။
Winklevoss အမှာ မခမျြးသာခငျတုနျးက Professional လှလှေျောအားကစားအဖွဈနဲ့ အသကျမှေးခဲ့ကွတယျ၊ အိုလံပဈပွိုငျပှဲတှမှော ဆုတံဆိပျရတဲ့အထိ ထူးခြှနျခဲ့ကွတယျ။ ဒီလို အားကစားသမားဘဝကနေ ConnectU ဆိုတဲ့ Social Media တညျထောငျလိုကျတဲ့ ၂၀၀၄ ကစလို့ ပိုပွီးလူသိမြားလာတယျ၊ အဲ့နှဈထဲမှာပဲ အခကျြလကျခိုးယူတယျလို့ Facebook ကို စှပျစှဲခဲ့ပွီး အမှုနိုငျတော့ အလြော $65 သနျးရခဲ့တယျ၊ ဒါနဲ့ ၂၀၁၃ လောကျမှာ Bitcoin ကို အခွခေံထားတဲ့ Math-based Asset ဝနျဆောငျမှုစတငျခဲ့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇငျဘာလညျးရောကျရော Bitcoin တနျကွေး $20,000 ရှိလာတဲ့အခြိနျမှာ Cryptocurrency နဲ့ ခမျြးသာလာတဲ့ ဘီလြံနာအမှာအဖွဈ ပွဌာနျးခံရတယျ။ ဒီလို Bitcoin နဲ့ ခမျြးသာခငျြတဲ့လူတှေ ဘာလုပျသလဲ? Mining Rig တှဆေငျပွီး အမုနျးရှာကွတယျ၊ ဈေးကှကျထဲမှာ GPU In-stock ပွတျသှားတဲ့အထိ ဖွဈကုနျတယျ။
တခြို့ငမျးငမျးတကျဖွဈသူတှကေ သုတသေနစငျတာကွီးတှေ၊ စူပါကှနျပြူတာတှေ သုံးပွီးရသလောကျ နှိုကျကွတယျ၊ အဲ့ထဲမှာ Tesla တောငျ အစဈပါသှားသေး၊ ရုရှားသိပ်ပံပညာရှငျတခြို့တောငျ အလုပျလုပျရငျး Crypto-mining လုပျနလေို့ အစိုးရအရေးယူ၊ Facebook နဲ့ တရုတျမှာ Ban ထားလိုကျတဲ့အထိ ကပျပါးတစ်ဆလေို Crypto မုဆိုးသှေး စုပျသောကျခဲ့ကွတာပါ။
အခုတော့ Juniper Research သုတသေန အဖှဲ့စညျးက Cryptocurrency မကွာခငျ ပြောကျကှယျသှားတော့မယျလို့ ကွညောလိုကျပွီ။ ဒီလို ဝငျသကျ၊ ထှကျသကျ မမှနျတော့ဘဲ အသကျရှုမဝဖွဈသှားရတာ ဘယျလိုတှကွေောငျ့လဲ? အဖွကေတော့ ရှငျးပါတယျ၊ 2018 ပထမသုံးလပတျ (ဇန်နဝါရီ၊ ဖဖေျောဝါရီ၊ မတျ) မှာ $1.4 ထရီလီယံ ရှိခဲ့တယျ၊ $1.4 ထရီလီယံ ရှိခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ တဈနှဈလုံးနဲ့ယှဉျရငျ တျောတော့ကို ထောငျတကျသှားတယျ ပွောရမယျပေါ့၊ ဒါမယျ့ ဒုတိယသုံးလပတျ (ဧပွီ၊ မေ၊ ဇှနျ) လဲရောကျရော $355 ဘီလီယံပဲ ရှိတော့တယျ၊ ရာခိုငျနှုနျးအားဖွငျ့ ပွောရမယျဆိုရငျ 75% လောကျ ထိုးဆငျးသှားတယျပေါ့။
Juniper ကတော့ ထပျပွီးကနြဦေးမယျ၊ တတိယသုံးလပတျ (ဇူလိုငျ၊ သွဂုတျ၊ စကျတငျဘာ) ပွီးသှားရငျ 47% လောကျ ကလြာဦးမယျ။ ဒီရကေတြာထကျတောငျ အခွနေဆေိုးနတေဲ့ Cryptocurrency ဂယကျက ဆိုးရှားလာတဲ့ အမရေိကနျ ၊ တရုတျဆကျဆံရေး အခွနေကွေောငျ့လား မပွောတတျပမေယျ့ Bloomberg မှာတော့ စကားစဈခငျးနပွေီ။
ဒီလို တဈစထကျတဈစ အဆိုးဖကျကိုဦးတညျလာနတေဲ့ အခွနေကွေောငျ့ Bitcoin ငှပေို့၊ ငှလှေဲ အရတှေကျလညျး အနှုတျပွလာတယျ။ ၂၀၁၇ မှာတုနျးက တဈရကျကို အကွိမျရေ 360,000 လောကျ လှဲပွောငျးခဲ့တာကနေ ၂၀၁၈ စကျတငျဘာ ရောကျလာတော့ 270,000 လောကျပဲ ရှိတော့တယျ။ ငှသေားအားဖွငျ့ ပွောရမယျဆိုရငျ $3.7 ဘီလီယံကနေ $670 မီလီယံ ဂဏနျးအထိ ထိုးဆငျးလာတယျ ဆိုရမယျပေါ့။
အခုလို အခွနေတေိုငျးသာဆိုရငျ ၂၀၁၈ နှဈကုနျပိုငျးလောကျမှာတငျ Cryptocurrency ဆိုတာကွီး လူတှပေါးစပျဖြားကနေ ပြောကျကှယျသှားနိုငျတယျ၊ ဒါထကျ Blockchain နညျးပညာသုံးပွီး သုံးရပိုလှယျအောငျ ထောကျပံ့ထားတဲ့ Platform နဲ့ Software စီမံကိနျးတှေ၊ ဘဝထဲတောငျ မရောကျလိုကျရဘဲ အဝမှာတငျ ပွညျဖုံးကားခခြံလိုကျရပွီလား၊ ပိုဆိုးသှားမှာက HTC၊ Exodus စမတျဖုနျးနဲ့ Blockchain နညျးပညာကို အမှယေူထားတာ။ ဒီလို ပြောကျကှယျသှားမယျဆိုတာထကျ Cyrpto-cash နဲ့ လညျပတျနတေဲ့ နရောတှမှောတေ့ာ အသုံးတှငျကယျြနဦေးမှာမို့ Long Live Cryptocurrency လို့ပဲ ပွောခငျြပါတော့တယျ။